China Tunnel Formwork orinasa sy mpamatsy |Lianggong
Tonelina formwork dia rafitra fanamboarana izay azo ampiasaina mandritra ny tsingerina ara-dalàna hanipy ny rindrina sy ny formwork ny fandaharana.Ity rafitra ity dia mamokatra rafitra mitondra entana mahomby izay ampiasaina betsaka.Mirefy 2,4-2,6 metatra ny habaka tonelina, izay manamora ny fizarazarana sy ny fananganana toerana kely kokoa.
Ny rafitra formwork tonelina dia ampiasaina amin'ny famokarana trano toy ny trano fonenana, trano am-ponja ary trano fonenan'ny mpianatra izay manana rafitra monolitika.Miankina amin'ny haben'ny rafitra, ny rafi-pamokarana tonelina dia manome fanariana gorodona ao anatin'ny 2 andro na ao anatin'ny iray andro.Ny tranobe vokarin'ny rafitra tonelina dia lafo vidy, mahatohitra horohoron-tany, manana lesoka kely amin'ny famokarana ary nampihena ny vidin'ny asa amin'ny rafitra.Ny rafitra tonelina dia tiana ho an'ny tranobe miaramila ihany koa.
Ny formwork dia namboarina manokana ho an'ny tetikasa tsirairay.Ny toetra miverimberina amin'ny rafitra sy ny fampiasana endrika efa vita ary ny fanamafisana ny tsihy / cages dia manamora ny fizotran'ny fanorenana manontolo, mamokatra asa milamina sy haingana.Ny teknika ampiasaina dia efa mahazatra ny indostria, saingy amin'ny fananganana tonelina dia tsy misy fiankinana amin'ny mpiasa mahay.
Mihatsara ny kalitao na dia eo aza ny hafainganam-pandehan'ny fanorenana.Ny tarehin'ny formwork mazava tsara, eny fa na dia vy aza, dia mamorona endrika malefaka sy avo lenta afaka mahazo haingo mivantana miaraka amin'ny fanomanana kely indrindra (mety ilaina ny palitao skim).Mampihena ny fepetra takina amin'ny fanarahana ny varotra izany, ka manome fitsitsiana fanampiny sy manafaingana ny dingana manontolo.
Ny helodrano lehibe namboarina tamin'ny endrika tonelina dia manome fahafaha-manao miavaka amin'ny famolavolana sy ny fisehon'ny trano ary manome fahafahana avo lenta amin'ny endriny farany.
Ny endriky ny tonelina dia manana sehatra miasa sy rafitra fiarovana amin'ny sisiny.Fanampin'izany, ny toetra miverimberina sy azo vinavinaina amin'ireo asa tafiditra dia mamporisika ny fahafantarana ny asa, ary rehefa vita ny fiofanana dia mihatsara ny vokatra rehefa mandroso ny fanorenana.Ny fepetra faran'izay kely indrindra amin'ny fitaovana sy fitaovana rehefa mamindra ny endriky ny tonelina dia mampihena bebe kokoa ny mety hisian'ny loza eny an-toerana.
teo aloha: Fiakarana fiara hidraulika
Manaraka: Cantilever Form Traveler